छ केही चिसो भगाउने अचुक औषधि ? के गर्ने ? – Health Post Nepal
२०७५ फागुन १६ गते १३:५४
चिसोबाट प्रभावित भएपछि तत्काल उम्किनुपर्ने हुन्छ । चिसो लागेपछि तपाईंलाई आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिन मुस्किल पर्छ । चिसोले समाति नै सक्यो भने तपाईंले अवश्य पनि केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
चिसोबाट छुटकारा पाउन केही उपाय अपनाउनुहोस्–
१) प्रशस्त पानी पिउनुहोस्
पक्कै पनि आवश्यक पोषण सम्पूर्ण स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ, निश्चित खाद्यान्न तथा ड्रिंक्स तपाईंलाई चिसोबाट छुटकारा दिलाउन महत्वपूर्ण हुन्छन् । तातो पानी चिसोबाट छुटकारा पाउने महत्वपूर्ण उपाय हो । तातो पानी प्रशस्त पिउनाले खकार, घाँटी खसखस तथा श्वास–प्रश्वासका समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
२) प्रशस्त निदाउनुहोस्
शरीरलाई आराम प्रदान गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निद्रा हो । यसले रोग निको नबनाए पनि राम्रो निद्राले विभिन्न संक्रमणसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । त्यसैले पूरा निद्रा सुत्न मिल्ने गरी आफ्नो कार्यसूची मिलाउनुहोस् । यसले शरीरमा अक्सिजन पुर्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
३) ध्यान गर्नुहोस्
चिसोबाट प्रभावित भएका वेला त्यसबाट छुटकारा पाउन औषधिबारे मात्र नसोच्नुहोस् । अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् कि, तनावले तपाईंको स्वास्थ्यलाई चौतर्फी आक्रमण गर्छ । त्यसैले पनि चिसो लागेका वेला स्ट्रेस फ्री हुनु जरुरी छ । ध्यानले तपाईंलाई स्ट्रेसबाट टाढा राख्न र शान्त रहन सघाउँछ । आँखा राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस् र आफ्नो श्वास–प्रश्वासमा केन्द्रित हुनुहोस् ।
एउटा गोली खाने र चिसो चटक्कै भगाउने, त्यस्तो अचुक औषधिको खोजीमा नलाग्नुहोस् । बरु प्रशस्त पानी, झोलिलो पदार्थ खानुहोस् र प्रशस्त आराम गर्नुहोस् । यी सबै सावधानीका साथ औषधि खानुभयो भने आवश्य निको हुन्छ ।
४) सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्
सरसफाइले भाइरस नियन्त्रण गर्नुका साथै चिसो लाग्नबाट रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बारम्बार हातले नाक तथा मुख छुने र त्यतिकै काममा जाने गल्ती नगर्नुहोस् । अनावश्यक हात नचलाउनुहोस् । निरन्तर सरसफाइ गरिरहनुहोस् । आफूलाई चिसो लागेको छ भने धरै भिडमा नजानुहोस् र चिसो लागेको मानिसको धेरै नजिक नजानुहोस् ।
५) दुर्भाग्यवश, कमन कोल्डको कुनै उपचार छैन
मनतातो पानीमा आधा चम्चा नुन मिसाउनुहोस् र राम्रोसँग घोल्नुहोस् । ३० सेकेन्डसम्म मुखमा लिएर बस्नुहोस् र थुक्नुहोस् ।